Youtube ayaa bedeshay shabakadeeda mar kale | Laga soo bilaabo Linux
Youtube ayaa bedeshay mar kale shabakadeeda
Ilaa goor dhow Google Wuxuu wax ka badal ku sameynayay dhowr ka mid ah hantidiisa, sidaas darteed Youtube sidoo kale isbedel ayaa lagu sameeyay iyadoo la adeegsanayo websaydh cusub.
El rasmiga ah Youtube blog Waxaan ku dhawaaqayaa in wejiga cusub ee bartaada la waafajiyay si dadka isticmaala ay si fudud oo raaxo leh ugu marin karaan kanaallada iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin.
La interface kor ku xusan ma xuma, laakiin isku day ah in lagu daro Google+ taas oo mararka qaar ahayd mid aad u jahwareersan oo xitaa ka careysiisa isticmaaleyaasha qaar. Iyada oo cusub Youtube interface wajiga ka nadiifsan badan ayaa la ogaan karaa oo, horeyba loogu awood siiyay qof walba, wuxuu balan qaadayaa inuu noqon doono mid dareen badan leh oo si fudud loo isticmaali karo.
Kuwa waxoogaa ka xanaaqsan isbeddelka farsamada iyo wax ka beddelka sawirada, tan Youtube cusub waxay hubisaa sahlanaanta weyn ee isticmaaleyaasha, ku talinta dariiqyada iyo fududeynta ku qoritaankooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » dhowr » Youtube ayaa bedeshay mar kale shabakadeeda
Iyada oo Terminal: Isticmaalka muujinta joogtada ah II: Beddelaad